Alcatel U5, dareenkii ugu horreeyay | Androidsis
Alcatel wuxuu ku labisnaa dhexda inta lagu gudajiray soo bandhigiddii ugu dambeysay ee alaabteeda. Daabacaaddii ugu dambeysay ee MWC 2017, soo -saaraha wuxuu soo bandhigay saddex nooc oo cusub, the Alcatel A5, Alcatel A3 iyo Alcatel U5.
Waxaan hore kuugu siiyay dareenkaygii ugu horreeyay ka dib markii aan isku dayay wax badan Alcatel A5 sida ee A3, hadda waa markiisa Alcatel U5, oo ah heer-gelitaan heer-gal ah oo suuqa ku dhici doona qiimihiisu yahay 99 euro iyada oo ujeedadu tahay in lagu weeraro baaxadda laga soo galo terminal aad u fudud.
Sida naqshadeynta, waxaan wajahaynaa terminal aad u caadi ah. Telefoonku wuxuu leeyahay jir ka samaysan polycarbonate oo, inkasta oo uu dhammaaday, gacanta ku dareemaya wanaag. Alcatel U5 ma aha mid aad u weyn waxaana si raaxo leh loo hayn karaa oo lagu isticmaali karaa hal gacan.
Badhamada ayaa bixiya wax ka badan safar sax ah iyo cadaadis ku filan. Badhanka koontaroolka mugga iyo furaha deminka / daminta labadaba waxay ku yaalliin dhinaca bidix ee taleefanka.
Sida aad arki doonto, naqshad aan sinaba u taagnayn laakiin taas oo aan wax badan ka weydiin karno haddii aan tixgelinno baaxadda uu Alcatel U5 ka tirsanaan doono.
Qalabka qalabkaan waa mid xadidan. iyada 5 inch screen Ma laha qaraar HD ah, oo joogi doona 854 x 480 pixels. Shaashadu waa mid cadaalad ah oo kuguma casuumi doonto inaad daawato fiidyowyo, haddii aan daacad ahay.
Marka laga hadlayo inta kale ee astaamaha farsamo ee Alcatel U5, waxaad dhahdaa waxay leedahay processor afar geesle ah MediaTek MT6737M oo ay weheliso 1 GB oo RAM ah iyo 8 GB oo kaydinta gudaha ah kaas oo lagu ballaarin karo kaarka micro SD -ka.
Kaameeraha ugu weyn ee taleefanka waxaa sameeya muraayad 5 megapixels leh flash halka kamarada hore ay ku jirto 2 megapixels. Su 2.050 mAh baytariga waxay noqon doontaa wax ka badan ku filan si loo taageero miisaanka buuxa ee qalabka taleefanka shaqeynaya, iyada oo aan loo baahnayn dalabyo dheeri ah.
Wax weyn laakiin waxaan ogahay inay taasi tahay Alcatel U5 wuxuu la imaan doonaa Android 6.0 M. In kasta oo ay run tahay in qalabkoodu xoogaa xaddidan yahay, haddana waxay ku dari karaan nooca ugu dambeeya ee nidaamka hawlgalka Google. Iyadoo la tixgelinayo in labada moodel ee kale ay sidoo kale la imaan doonaan Android 6.0 M, waxay umuuqataa in Alcatel uusan aad u xiisaynayn Android 7.0 Nougat. Ama ugu yaraan hadda.
Waana in taleefankani uu ku dhici doono suuqa ilaa bisha May, qiimihiisu yahay 99 euro, sidaa darteed wali waxay sii daayaan cusboonaysiin, in kasta oo aan aad uga shakisanahay. Taleefan aad u caqli badan oo, aragtidayda, uu leeyahay qalab aad uga hooseeya kuwa tartamaya.
Iyadoo la tixgelinayo qiimaheeda, waxaan heli karnaa xalal kale oo raqiis ah adigoon tagin bogagga Shiinaha si aad u iibsato taleefan raqiis ah. Markaan si dhaqso ah u fiiriyo suuqa waxaan arkay taleefanno ka wanaagsan, sida ZTE Blade A452 oo hadda qiimahoodu la mid yahay kan Alcatel U5 laakiin leh kamarad ka fiican iyo shaashadda HD.
Ma fahmi karo sida maanta soo -saarehu u soo bandhigo taleefan leh astaamahan qiimo nagu martiqaadaya inaan raadinno xalal kale oo ka fiican. Sida had iyo jeer, waa inaan sugno si aan u sameyno falanqayn qoto dheer oo ku saabsan terminaalkaan, laakiin markaan arko qalabka uu kan Alcatel U5 ku dhejiyo shaashadiisa xaddidan, waxay i siinaysaa in taleefankani uusan aad ugu guuleysan doonin suuqa .
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » MWC » Alcatel U5, dareenka ugu horreeya